Dadka Kunool Gobolka Kurdistaan ee Ciraaq oo maanta u codeynaya iney ka go’ayaan Ciraaq inteeda kale. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dadka Kunool Gobolka Kurdistaan ee Ciraaq oo maanta u codeynaya iney ka go’ayaan Ciraaq inteeda kale.
On Sep 25, 2017 232 0
Maamulka Kurdida ee gobolka Kurdistaan ayaa sheegay iney sameynayaan cod bixin ay ku go’aansanayaan iney ka go’ayaan dalka Ciraaq iyo iney kusii jiri doonaan.
Dadka ku dhaqan magaalooyinka Arbiil, Dahook, Suleymaaniyah iyo Xalbaja ayaa saaka u dareeray goobo loogu talagay iney codadkooda ku dhiibtaan oo gaaraya inkabadan 12 kun oo xarumood.
Mascuud Al-Baarazaani madaxweynaha Kurdistaan ayaa sheegay inaaney ka laaban doonin cod bixinta, islamarkaana sii wadi doonaan, isagona gaashaanka u daruuray warar kasoo baxay dowladda Ciraaq iyo qaar kamid ah dowladaha Caalamka oo sheegay iney kasoo horjeedaan cod bixinta.
Wuxuu sheegay in wax lala yaabo ay tahay in dowlado kale ay ka hadlaan masiirka dad aan u dhaln dalkooda, isagoona intaa ku daray ineysan jirin wax ay la wadaagi karaan Xukuumadda Baqdaad oo uu ku eedayay iney tahay mid Kooxeed.
Dowladaha Iiraan iyo Turkiga ayaa sheegay iney diidanyihiin cod bixintaas, waxaana ay xiriirka u jareen maamulka Kurdistaan, iyadoona ciidamada ilaalada xuduuda Iiraan ay billaabeen dhoolatus milliteri, waxaana Ruushku joojiyay tababaro uu magaalada Bacshiiqa ku siin jiray ciidamo hoostaga maamulka Kurdistaan.